निन्द्रा लागेन ? सुत्ने कोठाबाट हटाउनुस् यी ५ सामान
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०५:५७
दिनभरी थकान र कामको व्यस्तता पछि हरेक मानिसलाई पर्याप्त निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । तर गलेको शरीर लिएर ओच्छ्यानमा पुगेपनि कतिपय अवस्थामा राम्रोसं निन्द्रा पर्दैन । शारीरिक तथा मानसिक दुवै कारणले रातमा निन्द्रा पर्न ग्राहो हुन्छ ।तर, यसका लागी वास्तुशास्त्रले भने केहि कारणलाई लाई दोषि मानेको छ । वास्तु अनुसार निन्द्रा नपर्नुको कारण मानिसका केहि गल्तीहरु हुन् । अर्थात हामीले सुत्ने ओच्छ्यान नजिकै राखिने केहि वस्तुहरुको कारणले हामीलाई निन्द्रा पर्दैन ।
अधिकाशं मानिस सुत्ने ओच्छ्यानसम्म रुम स्लिपर लगाउछन् । साथै केहिले अन्यत्र लगाउने जुत्ता–चप्पल पनि बेडरुमसम्मै पुर्याउँछन् । वास्तुअनुसार यसरी जुत्ताचप्पललाई ओच्छ्यानमा पुर्याउँदा यसले नकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ र निन्द्रा पर्दैन ।
२। पानीको जगरगिलास
केहि मानिस राति उठ्दा तिर्खा लागेमा पानी चाहिने भन्दै सिरानी छेउमा पानीको जग वा गिलास राख्ने गर्दछन् । तर वास्तु अनुसार यसो गर्ने मानिसहरु मानसिक रोगको शिकार हुने उल्लेख छ ।
पानीको भाँडो सिरानीमा राख्दा चन्द्रमा प्रभावित हुने र स्वभावमा परिवर्तन भई मानिस रिसाहा प्रवृतिको हुने बताइएको छ ।
केहि मानिस राति सुत्ने बेलामा तेलले टाउको मालिस गरेर सुत्ने गर्दछन् । यस्तोमा उक्त तेल समेत ओच्छ्यानेको नजिक वा सिरानि छेउमा हुने गर्दछ । तर वास्तु अनुसार सुत्ने बेलामा तेललाई संगै राख्नु हुदैन । अन्यथा जीवनमा समस्या र उल्झनहरु आइपर्ने हुन्छ ।
अधिकाशं मानिसको सुत्ने कोठामा ऐना हुने गर्दछ । यति मात्र होइन कतिपयको त ओच्छ्यानमा नै ऐना राख्ने बानि हुन्छ । तर वास्तु अनुसार ओछ्यान नजिकै ऐना राख्नुहुँदैन । यसले शारीरिक रोग पैदा गर्छ । साथै, पति–पत्नीबीच अनावश्यक मनमुटाव हुन्छ ।
सुत्ने ओच्छ्यान नजिकै कोठामा मोबाइल वा ल्यापटप राख्नु हुदैन । अन्यथा मानिसलाई राम्रो निन्द्रा पर्दैन । तसर्थ मोवाइल वा ल्यापटप सुत्नुअघि आफूभन्दा पर राख्नुर्पछ । वास्तु अनुसार मोबाइल र ल्यापटपले राहु दोष पैदा गर्ने र यसले मानिसमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि दिइएको रकमको हिसाब खोजिन्छः मन्त्री बाँस्कोटा
प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : कमल थापा
बाडुल्की किन लाग्छ ? यस्तो छ– बाडुल्की लाग्नुको रहस्य
कोरोना महामारी रोकथामका लागि के के नियम पालना गर्ने?
लसुन सेवनका फाइदा
कोरोनाको दोस्रो डोज खोप आजबाट लगाईदैँ